Resaky ny mpitsimpona akotry : ditra-na katôlika | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : ditra-na katôlika
Ela izay no nanarahana fahatany ny fepetra tsy hita fototra, ampy izay noho ny fanajana fanjakana, ny fanatanterahana amina finiavana hikipy ny fandaharana ahiana hiteraka fahasahiranana bebe kokoa noho izao fisehon-draharaha efa diso sarotra be ihany izao. Izany angamba no hevitry ny mpitariky ny fivavahana katôlika mikasika ny fitantanana ny raharaha-pirenena amin‘ny ankapobeny, matoa mampiseho fahasahina handingana fanapahana noraisin’ny minisitera ny sampana miadidy ny fampianarana tontosain’ny sekoly katôlika. Fantatra ny lanjan’ny fampianarana sahanin’ny katôlika na noho ny isan’ny sekoly sy ny mpianatra karakarainy na noho ny fahombiazan’ny fampianarana sy ny fanabeazana tontosainy. Sarotra noho izany no ahafahan’ny minisitera hifandona mivantana ka nilefitra tsy fidiny amin’ny tsy fitsivalanana eo anoloanan’ity fandinganana didy ity. Sanatria ve miantso tody ingahy minisitra sa mamisavisa ny ratsy mba hisorohana ny fitrangany, loza tokoa mantsy araky ny voasoratr’io minisitra io, raha sanatria misy mpianatra voan’ny pesta mandritra ny fotoana efa ampianaran’ny katôlika ary mbola ikatonan’ny sekoli-panjakana. « Mivavaka sisa tsy isehoan’izany ».
Ny raiamandrenin’ny mpianatra amin’ny ankapobeny na manan-janaka any amin’ny sekolim-panjakana na any amin’ ny sekoly tsy miankina efa very hevitra be ihany. Tsy mitsotra ny minisitera mikasika ny sampona mety haterak’ity fahasahiranana tsy nampoizina ity, fa mbola mampanantena fahagagana ihany. Iza moa no tsy mitaiza ahiahy mikasika ny fihemoran’ny fampianarana ? Iray volana ao anatin’ny folo isan’ny volan’ny taom-pianarana izao no very, tsy hampiova inona hono izany, ho tanteraka antsakany sy andavany ihany ny vonton’ny fampianarana kasaina hampitaina na ny amin’
ny mpianatra mikasika ny taranja tsirairay eo amin’ny ambaratonga rehetra. Folo volana aza efa tsizarizary. Misitery foronin’ny minisitera izany matoa tsy hitany ny fomba hanazavana azy. Mety ho diso fanantenana ihany izy raha mihevitra hanao fahagagana, ny fanatontosana mahafa-po ny adidy andavan’andro aza efa tsy tratra, maika fa noho ity fahasahiranana manampy trotraka ity.
Ny fahavaratra koa ity efa mananontanona, asa koa izay fahasarotana mbola ho entiny. Ny tanjona ho tratrarina tsy maintsy faritana eo amin’ny fitantanana, tsy maintsy lanjalanjaina tsara ny fahafahana eo am-pandinihana an’io tanjona io, eo ny ezaka ilaina takina fa eo koa ny fanetren-tena mba tsy ho be famaritra fotsiny toy ny rambon’omby, ka ny eritreritra no avo fanidina fa ny zava-bita toy izao tsimponina amin’ny tany izao lalandava.